Jecha Ob. Lammaa Megersa tana me elaala dhuga fakatti ? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJecha Ob. Lammaa Megersa tana me elaala dhuga fakatti ?
Fardillee kunooti, Dirreenis kunooti jedhe jedhan. Ummatnis faayidaa fi mirga keenya kabajjisiisaa jechaati jira.
“Nuti qurxummii galaana keessaa baate taanee turre, lubbuu godhachuu dhaaf galaanatti deebi’uu qabna. Galaanni keenya immoo UMMATA KEENYA.
Ani waan faayidaa Ummata Oromoodhaaf waan dubbadheef kan mufatu mitii abbaan barbaade gara fedhetti haa garagalu. Abbaan Fedhe jibbee aaree ija diimeessee nu ilaaluus; ijji isaa diimatteeti dhiiga boosse haaboora’u malee; Kaayyoon keenya tokkoo fi tokko inniis fayyadamummaa ummata keenyaa mirkaneessuudha waan ta’eef Ejjennoo keenyarraa of duuba hin deebinu !!!”
Per. BMNO Obbo Lammaa Magarsaa
Our plan to eliminate TPLF and OPDO’s including their puppets, from all over Oromiyaa and establish a purely ABO/WBO controlling state under Gada Republic of Oromiyaa to store stability and peace horn of all East Africa.
We will also make life unbearable for those all Abasha’s crminals Tigre by psychological warfare where ever they are then, Oromo people take over from oppress state of empire and destroy all institutions which is impact on Oromo people for 150years.
After this all done,we will build our Democratic Gada Republic of Oromiyaa and then we will free all oppressing nations in Ethiopia.
Free Oromiyaa !
ARTIISTOTAA OROMOO **WALII HAA BIRMANNU** NEW OROMO MUSIC 2017
Obbo Lamma waan si gaafadhaa innumtti ati isa harga galfanne irratti haa hojjennu jetu kun maali? Maaluma inni isin Harkaa qabdan? Daguuggaa Sanyii Dhala namaaf hin malle Ilmmaan Tigirootaa Saba keenya Oromoo irratti Raawataa jiran kanaa dhaa? Yaa Obbo Lamma jechoota Qabsaawotaatti dhimma ba’aa jirtaa mee yoo dhuguma Sammuu fi Onnee kutataa qabda yoo taate mee Ilmmaan Oromoo Badii tokko malee mana hidhaa keessatti guuramanii jiran hiksisi! Akkasuma Diinota Oromiyaa Qircachuuf itti Duulaa jiru Waraana Oromoo Meeshaa Diinaa ta’ee Saba isaa Diina waliin ajjeesaa fi dhabamsiisaa jiru akka isaan Saba isaaniitiif dhaabbatan godhi. Akka isaan Saba isaanii cinaa dhaabbatanii Diina Oromoo irraa akka lolaniif ajaja itti dabarsii tarkkaanfii Diina irratti fudhachiis ykn lolchiis. Yoo kana hin taane! Uummatni ati har’a Arraba Dhadhaa Dibatee gowoomsaa jirtu kun Utuu ati Lubbuun jirtuu si keessaa gad harkkisee akka muru hubadhuti itti fufi!